आखिर सेल्फीको इतिहास कति पुरानो हो ? थाहा पानुहोस पुरा जानकारी | आखिर सेल्फीको इतिहास कति पुरानो हो ? थाहा पानुहोस पुरा जानकारी |
| Tuesday 29 September, 2020
आखिर सेल्फीको इतिहास कति पुरानो हो ? थाहा पानुहोस पुरा जानकारी
उज्यालो प्रतिनिधि September 29, 2020 प्रविधि
काठमाण्डौ । आजको समयमा सेल्फीको क्रेज सबैमा देखिन्छ। विकसित मोबाइल फोन र यसको क्यामेराको गुणस्तरमा सुधार आएकोले मानिसहरूलाई आफ्नो तस्विर लिनको लागि प्रोत्साहित गरेको छ। तर के तपाईंलाई सेल्फीको इतिहास थाहा छ? तपाईं यो जान्न चकित हुनुहुनेछ कि विश्वको पहिलो सेल्फी डेढ शताब्दी अगाडि लिइएको थियो।
विश्वको पहिलो सेल्फी १८५० मा लिइएको थियो। यद्यपि यो आजको जस्तो राम्रो सेल्फी होइन, तर एउटा स्व चित्र हो । यो सेल्फी स्वीडिश कला फोटोग्राफर ऑस्कर गुस्ताभ रजेलेन्डरको हो । यो सेल्फ-पोर्ट्रेट उत्तर यार्कशायरको हेरोगेटको मोर्फेट्सले ७० हजार पाउन्ड अर्थात १०,५९५,६३२.८४ नेपाली रुपैयाँमा लिलामी गरेको थियो।
यो पनि एक दावी
एक दावी छ कि पहिलो सेल्फी १८३९ मा लिइएको थियो । सेल्फी अमेरिकी फोटोग्राफर रोबर्ट कर्नेलियसले खिचेको थियो । उसले आफ्नो फोटो क्यामेराको साथ लिन खोजेका थिए ।
सेल्फी भनेको के हो?
मोबाइल फोनबाट आँफैले लिइएको फोटोलाई सामान्यतया सेल्फी भनिन्छ। तर विगत केही वर्षहरूमा यस शब्दको व्यापकता धेरै बढेको छ। सेल्फी शब्द अष्ट्रेलियाई वेबसाइट फोरम एबीसी अनलाइन द्वारा १३ सेप्टेम्बर २००२ मा पहिलो पटक प्रयोग भएको थियो। टाइम पत्रिकाले २०१२ को १० मौलिक शब्दहरूको बीचमा सेल्फी शब्दलाई स्थान दियो। २०१३ मा, अक्सफोर्ड डिक्शनरीले सेल्फी शब्दलाई वर्ड अफ द इयर घोषणा गरेको थियो ।
सन् २०११ मा धमाकेदार सेल्फी लिने काम सुरु गरिएको विश्वास गरिएको छ, जब मकाउ जातिका बाँदरले बेलाइती वन्यजीव फोटोग्राफर डेभिड स्लाटरीको क्यामेरा बटन थिचेर इन्डोनेसियामा सेल्फी लिएका थिए।